Horyaalka Serie A Oo Laga Mamnuucay Maaliyadaha Ama Garamada Cagaaran - Axadle Wararka Maanta
Horyaalka Serie A Oo Laga Mamnuucay Maaliyadaha Ama Garamada Cagaaran
Kooxaha horyaalka Serie A ayaa laga mamnuucay inay xirtaan maaliyad cagaaran laga bilaabo xilli ciyaareedka 2022-23 ka dib isbedelo lagu sameeyay sharciga horyaalka Talyaaniga.
Sida ay sheegtay Football Italia, sharcigaan ayaa dhaqangalay wixii ka bilowda sannadka danbe ka dib markii ay shirkada telifishinada ay walaac ka muujiyeen maaliyadaha cagaaran ee ay kooxaha xirtaan madaama uu midabkaas ku milmayo cawska garoonka oo isaguna cagaar ah.
Si loo kala garto cawska cagaaran iyo ciyaartoyda garoonka ku jirta horyaalka Serie A ayaa ka mamnuucay kooxaha inay maaliyad cagaaran garoonka ku soo galaan wixii ka danbeeya sannadka soo socda ee 2022.
Waxayna tani la micno tahay in kooxda Sassuolo lagu qasbi doono inay dib uga fekerto midabada maaliyadeeda koowaad oo ka kooban cagaar iyo xariiqmo madow ah.
Sassuolo kaliya kuma ciyaarin maaliyad cagaar ah xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. Atalanta ayaa iyadana sameysatay maaliyad midab cagaaran leh, halka Lazio ay maaliyadeeda martida ka dhigatay midabka cagaarka ah.
Sharcigaan cusub ayaa sidoo kale saameynaya buumaha iyo sigsaanta.
Vaccination against Covid-19 stagnates
Sanbaloolshe oo bixiyey xog aan horey loo ogeyn oo ku saaban…